Iphepha lokudlulisa ledijithali & Umhlinzeki Wokudluliswa Kokushisa kwe-Flex |U-Alizarin
Isipiliyoni seminyaka eyi-17 sembonini
10000㎡ Indawo yefekthri
20000 square metres okukhiphayo ngonyaka
Ukulinganisa kwenkampani Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd.
I-Fuzhou Alizarin Coating co., ltd, eyasungulwa ngo-2004, ingumkhiqizi omusha we-inkjet & color laser receptive coating kanye noyinki we-inkjet we-inkjet, i-laser plotter yombala & ne-cutting plotter.Ibhizinisi lethu eliwumgogodla ligxile ekukhiqizweni kwekhwalithi ephezulu, amaphepha ephrezentheshini namafilimu anezinhlobonhlobo ezihlukahlukene, kusukela kumidiya ye-inkjet, i-Eco-solvent inkjet media, i-Mild solvent inkjet media, imidiya ye-inkjet yokumelana namanzi kuya ephepheni lokudlulisa inkjet, umbala. iphepha lokudlulisa i-laser, i-Eco-Solvent Printable Flex kanye netafula lokusika i-Polyurethane Flex njll. Futhi sinolwazi olubanzi...
Ama-Milestone & Awards
I-Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd. yasungulwa.Ngawo lowo nyaka, kwethulwa iphepha lokudlulisa inkjet, okwakuyibhizinisi lokuqala eChina ukukhuthaza ngempumelelo ukusetshenziswa kwalo.
I-Eco-Solvent PU flex ephrintekayo yeza emakethe.
Iphepha lokudlulisa i-Laser yombala wethulwa emakethe kanyekanye.
Imikhiqizo yochungechunge lwefilimu ye-PU yezinga eliphezulu esikayo iyakhangiswa ekhaya naphesheya.
Ukuthengwa komhlaba wezimboni ongaphezu kwamamitha ayi-10,000
Imboni ithuthelwe efekthri entsha, enkulu ngokuphindwe izikhathi eziyisi-6 kuneyasekuqaleni.
Imikhiqizo ye-PU flex economical cuttable flex series yethulwa ezimakethe zaphesheya.
Imboni ye-Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd iwine isicoco se-Fujian High-tech Enterprise
Sihlinzeka nge-PrettyStickers HTS-300SRF ecwebezelayo ecwebezelayo ye-PU Flex yezingubo Zomsebenzi ezimibalabala, ungakwazi ukwandisa ukubonakala ngongqimba olukhanyayo lwe-pigment yezimpahla zakho Zomsebenzi ngaphansi kokukhanyisa.
Amaphrinta: Amaphrinta e-inkjet e-Eco-Solvent / Amaphrinta e-inkjet e-HP Latex / Amaphrinta we-inkjet we-UV
Umsiki: Zonke izinhlobo ze-vinyl cutting plotter
Ukucindezela kokushisa: 150~165°C no-15~25sec
Indwangu: Inhlanganisela kakotini engu-100%, ukotini ne-polyester, i-canvas kakotini engu-100%, isikhumba sokwenziwa njll.
I-HTGD-300 iwumsebenzi wesithombe-chromic onokukhazimula esisekelweni esimnyama kumugqa wephepha oyi-micron ongu-170 ongapendwe ngamakhrayoni we-wax, ama-Pastel kawoyela, omaka be-fluorescent, ipensela yombala, futhi iphrintwe amaphrinta ejethi kayinki ajwayelekile...
I-Eco-Solvent Metallic Printable PU Flex ingaphrintwa ngazo zonke izinhlobo zamaphrinta e-inkjet e-Eco-Solvent, ithole ukuqina okuhle ngombala ogcina isithombe, ukugeza ngemva kokugeza.
I-Eco-Solvent Printable Vinyl (HTV-300S) isekelwe kwifilimu ye-polyvinyl chloride ekhiqizwe ngokwezinga le-EN17 ngokunamathela okuncibilika okushisayo emugqeni wefilimu we-polyester, Ukusika Okuhle kakhulu kanye nezakhiwo zokukhula...
I-ReChina Expo iba minyaka yonke e-Shanghai kusukela ngo-2004. Njengomunye wemicimbi ebaluleke kakhulu embonini yokuphrinta nezinto ezisetshenziswayo, i-ReChina Expo yamukelwa kahle ngabangaphakathi embonini...
I-DPES Sign Expo China 2021
2021 DPES Guangzhou International Advertising Exhibition, DPES Sign Expo China 2021 Exhibition Hall: Poly World Trade Center Expo, Guangzhou Poly World Trade Center Expo Ikheli: Poly World Trade ...
Ividiyo Yezindaba Nezehlakalo